कसरी शैतान संग एक सम्झौता गर्न .. बस बकवास लेख्न छैन, तर मामला मा !!! | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
यो शान्त हुँदा जागा नहुनुहोस्। त्यसोभए तपाईं आफैले परिश्रम गर्नुहुनेछ यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ
थाहा छैन तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ
पहिले तपाईंले टाउकोको साथ मित्र हुन सिक्नु पर्छ। यदि यो सफल भयो भने, अरू सबै पहिले देखि नै यो कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
अगाडि शैतानवादीहरूलाई, तिनीहरू ठीक कुरा जान्दछन्!
इमान्दार हुन, मलाई कस्तो किसिमको संस्कारहरू गर्ने भनेर मलाई थाहा छैन, तर म किन तपाईंलाई यसको आवश्यकता छ भन्नेमा अचम्म लाग्दछ, यदि तपाईं वैज्ञानिक पक्षबाट बोल्नुभयो भने, यो नराम्रो नायकहरूको लागि कट्टरपन्थी छ, तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ कि यो तपाईंको मूर्तिको स्थितिमा उचालिएको थियो, र यदि हो भने, केवल तपाईंको समीक्षा गर्नुहोस् जीवन सिद्धान्तहरू र कम हेर्ने डरावनी फिल्महरू, यो मेरो व्यक्तिगत सल्लाह हो।
म तपाईलाई शुभकामना र सफलता चाहान्छु !!!!
तपाईं उहाँसँग पहिले नै सम्झौतामा हुनुहुन्छ)
तपाईंले यो धेरै पहिले बनाउनुभएको थियो जब तपाईं यहाँ जन्मनुभएको थियो - यस सम्झौतामा तपाईंले एक कृत्रिम ब्रह्माण्डको शैतान-अर्ध-दिमाग दिनुभयो - तपाईंको प्राण तपाईंलाई जीवित व्यक्तिको रूपमा राख्दछ, र यसको बदलामा एक फिल्मको लागि साइन अप गर्दछ - जीवनको भ्रम र सपनाहरू जुन तपाईंले यहाँ जीवनको लागि इमान्दारीसाथ विचार गर्नुहुन्छ - बुझ्ने र तपाईंसँग यसमा विश्वास गर्न केहि छैन, तपाईंको प्राण तपाईंसँग छैन र तपाईंसँग हुनुहुन्न - तपाईं जम्बीज हुनुहुन्छ। ।
यो हरेक अर्थलिंग को बारे मा छ
के तपाईं आफ्नो आत्मा बेच्न चाहानुहुन्छ? कतिको लागि?
उहाँलाई कल, प्रतीक्षा, उहाँलाई आउनको लागि इच्छा .. केवल पागलपन
तपाईंले हिजो यो प्रश्न सोध्नुभयो। उनीहरूले भन्छन् कि तपाईले आधा रातमा कालो बिरालोको साथ 4x सडकको चौबाटोमा जानु पर्छ। र बिरालालाई फाल्नुहोस् र धेरै पटक क्लिक गर्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा, शैतान आफैं बाहिर आउँदैन, तर उसको नोकर। त्यसोभए चलचित्रहरूमा यो देखाइन्छ र धेरै पुस्तकहरूमा यो लेखिएको छ कि मलाई इमान्दारीपूर्वक थाहा छैन। र बिरालोलाई नभई शैतान क्लिक गरेर
आफैंमा विपत्ती नराख्नुहोस्!
संयोगवश, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, एउटा कागजमा रेखस्टागमा हस्ताक्षर गरियो, एडोल्फ हिटलर र शैतानले हस्ताक्षर गरे। यो तारीख र वर्षको अगस्त 30 को 1932 मा संकलित गरिएको छ, मानव रगतमा लेखिएको। अनुभवी विज्ञहरूले नाजी नेताको हस्ताक्षर र रगतको प्रामाणिकता स्थापित गरे र यो निर्णय गरे कि यो 30 र 40 मा उसले खिचेको कागजातहरूको हस्ताक्षरसँग मिल्छ।
पहिले आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्। के तपाईंलाई यो आवश्यक छ? आत्मा भनेको के हो भनेर कसैले पनि जवाफ दिँदैन। यद्यपि स्वाभाविक रूपमा कोही पनि यसलाई दिन चाहँदैनन्। कुरा यो हो कि लेनदेनको समाप्ति पछाडि एक वर्ष 21 पछि, तपाईंले मर्न थाल्नुभयो। यदि तपाईं, जे होस्, यसमा ventured छ, तब हामी अगाडि बढ्छौं।
पाठ ल्याटिनमा लेखिएको छ, तर यो कडा कानून भन्दा यो अनुष्ठानको अलग भाग हो। अनुबन्ध तपाईंको आफ्नै भाषामा लेख्न सकिन्छ, हातले र प्राथमिकता तपाईंको आफ्नै रगतको साथ। उच्च शब्दावली अभिव्यक्तिको साथ आउन आवश्यक छैन, र यो पर्याप्त छ कि विचारहरू ईमान्दार छन्। उदाहरण: शैतान, म 21 एक वर्ष पछि मेरो प्राण फिर्ता दिने प्रतिज्ञा गर्दछु (नरकको इतिहासमा यो सजायको मुख्य उपाय हो, किन यो ज्ञात छैन) किनकी सम्झौता समाप्त भएको क्षणदेखि, केही अवस्थाहरूमा यो तपाईंलाई तत्काल चेतावनी दिन लायक छ: आफ्नो अभिलाषामा संयमित रहनुहोस्। बेवास्ता नगर्नुहोस्, तपाईं कहिले संसारको मालिक बन्नुहुनेछैन, र धेरै सुनले तपाईंको टाउको पनि छोप्नेछैन, र क्रोधित शैतानहरूले तपाईंलाई एकै क्षणमा फाडनेछ।
तपाईंको सम्झौताको सूक्ष्मतालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। यसमा प्रत्येक विस्तारमा छलफल गर्नुहोस्, त्यस बिन्दुमा कि यदि एउटा बिन्दु कार्यान्वयन गरिएको छैन भने लेनदेन रद्द हुन्छ। शैतान पनि पापी छ र कुनै पनि नराम्रो कुरा उसको लागि एलियन हुँदैन, ऊ तपाईंलाई सबैभन्दा पहिला धोका दिन चाहन्छ। यसका बारे नबिर्सनुहोस्!
तपाईंले आधारभूत सर्तहरू वर्णन गरिसक्नु भएपछि र तिनीहरूलाई तल अंडरवर्ल्डको 21 कुञ्जी खिच्नुभयो: AGLON, TETRAGRMMATON, VachEON, STIMUAMTHON, GHHARES, RETRASAMTHON, CYRRAN, ICGON, EIGTON, EXITGIEN, ERGON, EOGAAG SABOTH, EHXITGIEN, ICHGON, ADNAI, तपाईंले तिनीहरूलाई ठूलो स्वरले उच्चारण गर्नु पर्छ (राम्रोसँग ल्याटिन ट्रान्सक्रिप्शन सिक्नुहोस्), र त्यसपछि भूतलाई बोलाउनु पर्छ।
कल गर्ने समारोह निम्नानुसार छ, तपाईंले अर्थोडक्स मोमबत्तीहरूले रेखांकित पेन्टाग्राममा उभिनु पर्छ र 21 पटक दोहोर्याउनु पर्छ: म तपाईंलाई अँध्यारोका मालिक, ईभिलको मास्टर, रातको प्रभु, मकहाँ आएर मेरो इच्छा पूरा गर्दछु! आमेन
तपाईंले स्पष्टसँग महसूस गर्नुहुनेछ जब भूत देखा पर्छ, र त्यसपछि ठूलो स्वरले सम्झौता पढ्नुहोस्। त्यसो भएमा आफ्नै रगतले साइन इन गर्नुहोस्। चर्चको मैनबत्ती जलाउनुहोस् जुनसँग पेन्टाग्राम कोरियो र यसमा भएको सम्झौता मेटाउनुहोस्। यसैले, तपाईं यसलाई समानान्तर आयाममा हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। यदि कागज तुरुन्तै भरिए, तब सहमति सही शैतानको हस्ताक्षर मा समाप्त हुन्छ। ध्यानपूर्वक संकलन गर्नुहोस् र खरिदलाई एकान्त स्थानमा बचत गर्नुहोस् यो तपाईंको ट्रम्प कार्डको समाप्ति सम्म।
सम्पूर्ण रीतिथितिलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस्। मलाई मेरा धेरै ग्राहकहरू छन् जो सबै कुरा ठीक गर्न चाहँदैनन् र जसले नाटकीय रूपमा भुक्तानी गर्छन् ऊर्जाको साथ कुराकानीको प्रक्रियामा उच्च रक्तचापको कारण मरे। र एक कागजात देखि आफ्नो खरानी शेष खारेज, र समय भन्दा अघि मृत्यु भयो। याद गर्नुहोस् दुष्टको कपटीपनको कुनै सीमा छैन।
यदि तपाईं एक सम्झौता ....
निष्कर्ष पछि (नतिजा) -
- तपाईं अनन्त डर र "मानिस" लाई घृणा को लागी प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, अनन्त अँध्यारो, तपाईं केवल यो शब्द (अनफिनिटी) को लागी सोच्नुहुन्छ - तपाईंले मात्र यो महसुस गर्नुहुन्छ जब हिसाब गर्ने समय आउँदछ, तपाईंलाई थाहा छैन के तपाईलाई पर्खिरहेको छ। र यसो नभन कि तपाई के जाँदै हुनुहुन्छ जान्नु हुन्छ, तपाईलाई थाँहा छैन!
सबै पछि, भूत र शैतानले तपाइँलाई सोधेको सबै तपाइँको आत्मा हो। र तपाईं सँधै पश्चाताप गर्नुहुन्छ तपाईंले सम्झौता गरेको क्षणमा। तपाईं नर्कमा एक मिनेट बिताए पछि यो संसारलाई सराप दिनुहुन्छ। जे भए पनि तपाई सायद जान्नुहुन्न कि लेनदेनको समाप्ति पछि शैतान वा शैतानले तपाईको माथि एउटा इरेक्शन भेट्टायो, जस पछि तपाईं तुरून्त यस संसारबाट गायब हुनुहुनेछ! तर तपाइँको लागि, तपाइँको सम्पूर्ण जीवन बितेर जानेछ ...
सरलको साथ सुरू गर्नुहोस् ... पहिलो, शैतान को हो र कहाँबाट यो पत्ता लगाउन सक्छ .. दोस्रो, तपाईं उसलाई के गर्न चाहानुहुन्छ वा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ र किन तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि यसले उसलाई चासो दिनेछ किनकि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू इच्छुक छन् र ती सबै एक हो))))))
त्यसैले तपाईं र उसलाई ठेगाना!
तपाईंलाई किन यो आवश्यक छ?
अहो वर्ष 10 "पुरस्कार" को मजा लिनुहोस्, र त्यसपछि सदाको लागि मर्नुहोस्। वा हुनसक्छ तपाईं दुष्टको सेवामा लाग्न चाहनुहुन्छ?
सभ्यताबाट तीन दिनको लागि टाढा जानुहोस्। पाल, न्यूनतम खाना लिनुहोस् र वनमा बसोबास गर्नुहोस्। ताकि कुनै पनि जीवित आत्मा नजिक छैन। दोस्रो दिनमा सूर्यास्त हुँदा, समाशोधन फेला पार्नुहोस्। केन्द्रमा खडा। घाम अस्ताउन नसक्ने बित्तिकै पहिला र पछिसम्म यसो भन्नुहोस्: “म आफ्नो प्राणलाई किन्नुहुनेको खोजी गर्दैछु। इच्छा पूरा गर्नुहोस् - तपाईंको आत्मा। "त्यसोभए चुप लाग्नुहोस्। शब्द हैन, ध्वनि होइन। घर आउनु भन्दा पहिले कसैलाई नभन्नुहोस्। अब के हुन्छ हेर्नुहोस्। पहिले धेरै शिकारीहरू छन्। म शैतानमा विश्वास गर्दिन। तर मलाई व्यापारीहरू, छिमेकी संसारका व्यापारीहरू बारे थाहा छ। उनीहरू तिमीलाई भेट्न खुसी हुनेछन्। ।
तर सामान्यतया यो बकवास छ)
आत्मालाई हटाऊ, तिमी पनि हुनेछैनौ। शरीर एक कार जस्तै छ र आत्मा ड्राइभर जस्तै छ। तपाईं एकै समयमा कार अप गर्न चाहानुहुन्छ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ हुनेछैन, त्यहाँ ड्राइभ गर्न कोही पनि हुँदैन। त्यो हो, यदि तपाईं आफ्नो आत्मा बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईं समयपूर्व मृत्युलाई जित्न सक्नुहुन्छ र तपाईं पहिले नै केही संस्थाको दास हुनेछ। एक संरक्षक (स्वर्गदूतहरू) को लागी राम्रो खोजी गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई विकासको बाटोमा डो will्याउनेछ मृत्युलाई होइन
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,430 प्रश्नहरू।